“Hear” နဲ့ “Listen” တို့ရဲ့ လုပ်ငန်းသဘောသဘာဝ | Mycanvas
“Hear” နဲ့ “Listen” တို့ရဲ့ လုပ်ငန်းသဘောသဘာဝ
ပြီးခဲ့တဲ့တစ်ပါတ်ကရှင်းပြခဲ့တဲ့အတိုင်း၊ သင်ဟာ “hear”, “listen” နဲ့ “ask” ဆိုတဲ့နည်းလမ်းတွေကိုဂရုပြုသင့်ပါတယ်။ ဒီဆောင်းပါးမှာတော့ “hear” နဲ့ “listen” တို့အကြောင်းကိုဖော်ပြရန်သွားမှာဖြစ်ပါတယ်။
“Hear” ရဲ့ သဘောကတော့ သင့်ရဲ့ နားထဲကိုအသံတွေ အလိုအလျောက်ရောက်လာတဲ့ ကြားရခြင်းမျိုးဖြစ်ပြီး၊ “Listen” ရဲ့ သဘောကတော့ တခြားသူပြောစကားတွေကို သေချာအာရုံစိုက်ပြီး နားထောင်ခြင်းမျိုးဖြစ်ပါတယ်။ စီးပွားရေးအမြင်အနေနဲ့ဆိုရင်‌တော့ “Listen” ဆိုတဲ့ နားထောင်နိုင်ခြင်းစွမ်းရည်က မရှိမဖြစ်လိုအပ်ပါတယ်။ ဒီစွမ်းရည်ကတော့ တခြားသူတွေရဲ့ပြောစကားတွေကို စေ့စေ့စပ်စပ်နားထောင်ပြီး သူတို့တွေကို သင်သိချင်တဲ့ အကြောင်းအရာတွေကို ဆက်လက်ပြောစေဖို့ အားပေးပါတယ်။ Fresh Businessperson တစ်ဦးအနေနဲ့ သင့်ရဲ့ အဖွဲ့နဲ့အတူ ကြီးမားတဲ့အောင်မြင်မှုတွေရရှိနိုင်စေဖို့ ဒီ Listening စွမ်းရည်ကို ကျွမ်းကျင်ထားဖို့တော့ လိုပါမယ်။
[နားထောင်ခြင်းစွမ်းရည်ရဲ့ ကောင်းကျိုး ၃မျိုး]
နားထောင်ခြင်းစွမ်းရည်ကိုကျွမ်းကျင်တဲ့အခါ ရရှိတဲ့ကောင်းကျိုး သုံးခုရှိပါတယ်။ ပထမဦးစွာ သင်အာရုံစိုက်နားထောင်တဲ့အတွက် သူတို့ရဲ့အခြေအနေတွေကို နားလည်ဖို့ပလွယ်ကူလာပါလိမ့်မယ်။ သင်အာရုံစိုက်လေလေ၊ သူတို့ပြောတာတွေကိုနားလည်လေလေ ဖြစ်ပြီး သူတို့ရဲ့ စိတ်နှလုံးကို ကျယ်ကျယ်ပြန့်ပြန့် ဖွင့်ဟလေလေ၊ သင့်ကိုသူတို့ပိုပြီပွင့်ပွင့်လင်းလင်းပြောလာလေလေ ဖြစ်ပါတယ်။ ဒုတိယတစ်ခုအနေနဲ့ သင်ဟာကောင်းမွန်တဲ့ လူ့မှုဆက်ဆံရေးကိုတည်ဆောက်လာနိုင်ပါလိမ့်မယ်။ သင်ရဲ့ထင်မြင်ယူဆချက်တွေနဲ့ စိုးရိမ်မှုတွေကိုနားထောင်သူတစ်ဦးအနေနဲ့ သင့်ကိုယုံကြည်ထိုက်သူတစ်ဦးအဖြစ်လက်ခံလာပါလိမ့်မယ်။ နောက်ဆုံးတစ်ခုကတော့ သင့်ကိုယ်သင်ပိုမိုနားလည်လာပါလိမ့်မယ်။ သင်နဲ့ မ‌တော်တဲ့ တခြားသူရဲ့ ဖိနပ်ကို စီးကြည့်သလိုပဲ သင့်ကိုယ်သင် ဘယ်အရာနဲ့ သင့်တော်လဲဆိုတဲ့ Self-awareness မျိုးရရှိလာပါလိမ့်မယ်။
[သင်ရဲ့နားထောင်နိုင်ခြင်းစွမ်းရည်ကိုတိုးတက်စေရန်နည်းလမ်း ၄ ခု]
1. နောက်ကြောင်းပြန်ခြင်း (Parroting)
2. အခြားသူတစ်ဦးရဲ့ ပြောဆိုချက်ကို ပြန်လည်ပြောဆိုခြင်း
၃။ တိတ်ဆိတ်နေရခြင်းကို မနှစ်သက်ခြင်း
4. အခြားသူတစ်ဦးရဲ့ မျက်နှာရိပ်မျက်နှာကဲနဲ့ ကိုက်ညီအောင်ပြောဆိုခြင်း
Listening ဟာ Hearing နဲ့ ကွဲပြားပါတယ်။ Listening မှာတော့ သင်ဟာ အားထုတ်မှုတစ်ခုပြုလုပ်ဖို့ လိုပါတယ်။ Listening ဟာ ခက်ခဲတယ်လို မထင်ရသော်လည်း တကယ်တမ်းအာရုံစိုက်ဖို့မလွယ်ကူပါဘူး။ သို့သော်လည်း Listening စွမ်းရည်ဟာ သင့်အတွက် စီးပွားရေးဆိုင်ရာ စွမ်းရည်တစ်ခုဖြစ်ပြီး သင့်အတွက်လိုအပ်တဲ့ ပြောဆိုဆက်ဆံရေးဆိုင်ရာစွမ်းရည်တစ်ခုဖြစ်ပါတယ်။ စီးပွားရေးစွမ်းရည်မြင့်မားသူများဖြစ်လာဖို့အတွက် ကျွန်ုပ်တို့ရဲ့နားထောင်ခြင်းစွမ်းရည်ကိုတိုးတက်အောင်ကြိုးစားလိုက်ကြရအောင်နော်…